Marais Masay : tovolahy mpitondra moto maty nofaohin’ny 4×4 | NewsMada
Marais Masay : tovolahy mpitondra moto maty nofaohin’ny 4×4
Maty tsy tra-drano ity tovolahy iray vao erotrerony nofaohin’ny fiara 4×4 teny Marais Masay, ny asabotsy hariva teo. Araka ny fanazavana azo, nitondra moto Scooter ilay tovolahy io, nijanona amoron-dalana, kanjo nofaohin’ny fiara 4×4 nandeha mafy tampoka avy any aoriana. Tsy nijanona anefa ilay fiara 4×4 io fa nitsoaka. Nanamafy ny naman’ilay tovolahy io fa nitsoaka ilay fiara, ary nijanona tamin’ny sisin-dalana ilay moto nentin’ilay tovolahy. Nilaza moa ireto farany fa tadidiny ilay fiara ary manao antso avo mba hitolo-batana. Efa mipetraka rahateo ny fitoriana momba izany.
Mazava ho azy fa fandikan-dalàna heloka bevava ny mahafaty olona sady mitsoaka avy eo. Mety hampigadra 5 taona ka hatramin’ny 20 taona an-tranomaizina ny raharaha tahaka itony, araka ny didy aman-dalàna famaizana.
Ankoatra izay anefa, mila fahamailoana ihany koa ny resaka moto, ny fitondrana azy, ny fanajana ny lalàn’ny fifamoivoizana. Be ny matimaty foana no ho ny tsy fahafehezana ity moto ity.
Olona 50 teny amin’ny HJRA
Ankoatra ity loza ity, azo lazaina fa nihena ny isan’ny olona nentina teny amin’ny HJRA nandritra ity fetin’ny Pentekosta ity. Raha ny isa omaly, manodidina ny 50 eo ny olona nentina teny an-toerana. 17 ny olona naiditra tany amin’ny “reanimation medicale”. Olona iray tratran’ny hamamoana diso tafahoatra ka mbola tsy mahatsiaro tena. Ankoatra ireo ny naratra ny ady, sy ny lozam-pifamoivoizana.